१० वर्ष निसन्तान रहेकी जुम्लाकी महिलाले एकै पटक जन्माईन तीन छोरा ! – हाम्रो देश
१० वर्ष निसन्तान रहेकी जुम्लाकी महिलाले एकै पटक जन्माईन तीन छोरा !
१८ पुस – निसन्तानको पीरमा करीव १० वर्ष गुजारेकी एक महिलाले एकैपटक तीन (तिम्ल्याहा) सन्तान जन्माएकी छन् । जुम्लाकी ३४ वर्षीया एक महिलाले नर्भिक इन्टरनेशनल हस्पिटलमा आइतबार विहान तीन जना सन्तान जन्माएकी हुन् । लामो समय निसन्तान समस्या भोगेकी ती महिलाले टेष्टट्युव बेबी भनिने इन्भिट्रो फर्टिलाइजेसन विधिबाट तिम्ल्याहा छोरा पाएकी हुन् ।
पेटमा धेरै शिशु हुँदा पुरा अवधी राख्न पनि समस्या हुने डा शर्माले बताइन । यी तीन वटा शिशु ३५ हप्ताका हुन् । ‘सामान्य त हामीले ३७ हप्ता पछि जन्मनेलाई नर्मल मान्दछौँ । तर यो तीनजना भएकोले केही छिटो निकाल्नु प र्‍यो,’ उनले भनिन् । आइतबार विहान तिम्ल्याहा शिशु काखमा लिएको फोटो राख्दै डा. शर्माले भनेकी छन्, ‘नयाँ वर्षको गज्जव सुरुवात !’